Khin Maung Chin: ညပြာပြာရဲ့ပန်းသီး
ဟိုးအဝေးကြီးမှာပေါ့..။ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တဲ့ညတစ်ညရှိခဲ့ဖူးတယ်..။ညကသိပ်မှောင်လွန်းနေသလား..။ မမြင်ရပါဘူး.။ ပုခက်ထဲမှာအိပ်မောကျဖို့
ကြိုးစားနေတဲ့ကလေးရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာသူ့မေမေရဲ့တေးသံကအလွန်လှပစွာ အသက်ဝင်လို့..။ မေမေဟာသူ့အတွက် နတ်သမီးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်..။
ကြူတဲ့ အထိအတွေ့နဲ့အတူမျက်ရည်တွေစွန်းထင်းကုန်တယ်..။ ရှိုက်သံစွက်တဲ့စကားသံတွေက ဟိုးအဝေးကလာနေသလို ကလေးရဲ့အသိမှာမှုန်ဝါး
မနက်မိုးလင်းလင်းချင်းကလေးငယ်သတိထားမိခဲ့တာက သူ့မေမေရဲ့သိမ်မွေ့တဲ့လက်တစ်စုံအစား ကြမ်းရှသန်မာတဲ့ဖေဖေ့ရဲ့လက်တွေနဲ့ထွေးပွေ့ မ,ချီ
ယူခဲ့တာကိုပဲပေါ့..။ဖေဖေရဲ့မျက်ဝန်းတွေကနေဝန်းကြီးလိုရဲရဲနီလို့..။ ဖေဖေကငိုထားတာလား..။ ကလေးရဲ့သိမှု့နယ်ပယ်နဲ့ဝေးသီခေါင်ဖျားလွန်းတဲ့အ
ဖို့ပြင်နေတဲ့မမရဲ့မျက်နှာလည်းမကောင်းဘူး.....။မျက်နှာလေးငယ်ငယ်နဲ့ဘွားဘွားလုပ်ပေးသမျှ တုတ်တုတ်တောင်မလှုပ်ရဲပဲထိုင်ကြည့်နေရှာတဲ့မမကိုငေးကြည့်တော့ ညီမလေးရယ်ဆိုပြီးကလေးကိုပွေ့ချီတယ်..မမရဲ့အသံကတိုးတိုးလေးပဲ..။လူကြီးတွေမကြားနိုင်အောင်ပြောတယ်...။ မေမေမရှိတော့ဘူး...ထွက်သွားပြီတဲ့..။
အဲဒီစကားတွေကိုကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့အသည်းထဲထိစွဲနေအောင်ပြောခဲ့တာ မမပေါ့..။ အဘွားရဲ့ကြမ်းရှတဲ့စကားသံတွေ
ကိုတော့ကလေးကနားလည်ဖို့စောနေခဲ့သေးတယ်..။ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်နေတဲ့အဘွားရဲ့စကားသံတွေက မေမေ့တေးဆိုသံလိုလည်းမသာယာ၊နတ်သမီးလေးနဲ့လည်းမတူပါဘူး..။ ကလေးရဲ့နားထဲမှာမခံမရပ်နိုင်အောင်ပဲ..။ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ထငိုလိုက်တဲ့ကလေးကိုဖေဖေနဲ့ကျောင်းသွားခါနီး မမက
ပြေးချီချော့မော့ကြတယ်..။ခဏပဲငိုပါတယ်..။ဖေဖေနဲ့မမကိုသနားလို့လေ..။ ကလေးရဲ့အသိစိတ်ထဲစွဲနေခဲ့တယ်..။ နောက်နေ့တွေမှာဖေဖေ၊မမနဲ့သာအ
တကယ့်အမှန်တရားစစ်စစ်မဟုတ်ဘူး..။လူတွေအမှန်တရားကိုမတွေ့နိုင်ကြတော့တာကလည်း အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး....။ သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေက
ဒီလိုနဲ့ကလေးဟာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်....။ဖေဖေနဲ့မမကလွဲရင်ဘယ်သူနဲ့မှစကား မပြောတဲ့ကလေးကိုလူတွေကကရုဏာသက်ဟန်နဲ့ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြတယ်..။ လူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲထွင်းဖောက်မတတ်စိုက်ကြည့်တတ်တဲ့ကလေးရဲ့မျက်ဝန်းတွေကိုတော့ သိပ်ရိုင်းသတဲ့လေ..။
''နင်တို့ရဲ့အမေကို .......ဆိုတဲ့'' စကားကိုကလေးငယ်ငယ်တည်းကအသည်းစွဲအောင်ကြားခဲ့ရတာ..။မေတ္တာငတ်တဲ့၊ခိုကိုးရာမဲ့တဲ့ ကလေးတို့ညီအစ်မကို
''နင်တို့လည်း.............'' အဲလိုစကားတွေနဲ့ရိုင်းခဲ့၊ကြမ်းခဲ့ကြတာတွေကို ကလေးကကျောခိုင်းတတ်ခဲ့တာပေါ့..။တကယ်တော့ကလေးရဲ့မေမေကနတ်သမီး
ဘယ်တော့မှကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတွေမပြောခဲ့ဘူး..။ကလေးသိတာပေါ့.။မေမေဟာနတ်သမီးဆိုတာ..။ မေမေဆိုတဲ့သီချင်းတစ်စတောင် ကလေးမှတ်မိနေသေးတာပေါ့..။
''မေမေ့ခြေရာနင်းတဲ့ အလှကြိုက်တဲ့သမီးငယ်ရယ်.''...ဆိုတာ....။ တခါတလေအဲဒီသီချင်းကိုတိုးတိုးညည်းတော့ကြားဖြစ်အောင်ကြားသွားတဲ့အဘွားက
လိုအပ်သလောက်ပဲပြောဆိုတဲ့အခါ ရန်လိုတဲ့ကလေးတဲ့..။တချို့ကတော့ သနားစရာကောင်းသတဲ့..။မေတ္တာတရားအကြောင်းကိုနားမလည်ဘူးတဲ့လေ...။
သူတို့ပြောကြတာကတော့ ''ပန်းသီးမစားဖူးတဲ့ကလေးဟာ ပန်းသီးရဲ့အရသာကိုဘယ်သိမလဲတဲ့..။ဒါကြောင့်ရိုင်းတာတဲ့...။''
ညီမလေးရယ် လူတွေကဒီလိုပါပဲလို့နှစ်သိပ်မယ်..။ မမကတော့ကလေးလိုမဟုတ်ဘူး...။သူ့မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေကို..ဆံပင်တွေနဲ့အုပ်ကာလို့ မျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ကျအောင်ငိုရင်းမေမေ့ကိုတ တယ်..။မေမေရယ် သမီးတို့ညီအစ်မကိုမြန်မြန်လာခေါ်ပါတော့လို့...တိုးတိုးလေးပြောရှာတယ်..။ကလေးကတော့မငိုဘူး..။ မေမေတနေ့ပြန်လာခေါ်မှာသိပြီးသား..။မေမေကပြောခဲ့တယ်လေ သမီးလေးကိုပြန်လာခေါ်မှာတဲ့.....။
ခဲ့ရတယ်..။လူတွေအမှန်တရားကိုမသိတဲ့အကြောင်းကလေးနားလည်ခဲ့မိတာကြာပါပြီ...။ ညပြာပြာနဲ့ပန်းသီးတစ်လုံးကို သူတို့တွေ့အောင်မရှာနိုင်ကြဘူး..။သူတို့ရဲ့အမြင်
မှာမေမေကရက်စက်တဲ့မိန်းမ...။ကလေးကမေတ္တာတရားရဲ့အရသာကို နားမလည်တဲ့သူ..။မခံစားခဲ့ရသူ..တဲ့..။မေတ္တာတရားအကြောင်းကို ကလေးကပိုသိသူဖြစ်ပြီး
အဲဒီညက ကလေးရဲ့လက်ထဲပန်းသီးလေးတစ်လုံးရောက်လာပုံက လှလွန်းတယ်..။နှစ်တွေကြာလှပြီ..။ဘယ်တော့မှမရိုးနိုင်ခဲ့ဘူး..။ကြင်နာတတ်တဲ့မေမေ့ရဲ့ကြယ်တာ
ရာမျက်ဝန်းတွေ၊မေတ္တာငွေ့နွေးနွေးနဲ့လွှမ်းခြုံထားလိုက်တာခုထိနွေးထွေးနေတုန်းပဲ...။ မေမေ့ရဲ့အသံဟာချိုခဲ့လိုက်တာ...ဘဝတစ်ခုလုံးတောင်လုံခြုံလို့ ပြန်လာခေါ်မှာတဲ့လားမေမေ.........။
မငိုပါနဲ့မေမေရယ်...။အဲဒီတော့မှလူတွေကို ကလေးကရင်ကော့ပြီးပြောမယ်......ညပြာပြာမှာသိပ်ချစ်ရတဲ့ ပန်းသီးတစ်လုံး ရှိနေခဲ့ဖူးတဲ့ အကြောင်းကိုပေါ့..။
Jul 25, 2011, 10:40:00 AM
Jul 25, 2011, 5:13:00 PM
အစ်ကိုပျောက်နေတယ်လားလို့.ခုတော့ ပေါ်လာပြီပေါ. လာလည်တာကျေးဇူးပါ..ကလေးလေးရဲ့ နေရာက ဝင်ရောက်ခံစားသွားပါတယ်..ရင်ထဲကို တည့်တည့်ဝင်တဲ့ မိခင်မေတ္တာဖွဲ့လေး အရမ်းနှစ်သက်မိပါတယ်... များများရေးနိုင်ပါစေ..